Akụkọ - Uru nke valves plastik?
Uru nke plastic valves?
Ka ọnụ ọgụgụ nke ọkpọkọ rọba na mmiri ọkụ na mmiri oyi na ngwa injinịa ọkpọkọ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu, njikwa mma nke valves plastik na sistemu ọkpọkọ rọba na-aghọwanye ihe dị mkpa.
N'ihi uru nke ịdị arọ dị arọ, nkwụsị nke corrosion, enweghị mgbasa ozi nke ọnụ ọgụgụ, njikọ jikọtara ya na ọkpọkọ plastik, na ogologo ndụ nke valves plastik, a na-eji valves plastik mee ihe na mmiri (karịsịa mmiri ọkụ na kpo oku) na mmiri mmiri ndị ọzọ na-emepụta ihe. N'ime usoro ọkpọkọ, uru ngwa ya na-enweghị atụ na valvụ ndị ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, na mmepụta na ntinye nke valvụ plastik ụlọ, ọ dịghị ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji chịkwaa ha, na-ebute àgwà na-adịghị mma nke valvụ plastik maka inye mmiri na mmiri ndị ọzọ maka iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-eme ka njedebe lax na nkwụsịtụ na ngwa injinia. N'ezie, o meela nkwupụta na enweghị ike iji valvụ plastik mee ihe, nke na-emetụta mmepe nke ngwa ngwa ọkpọkọ plastik. A na-ahazi ụkpụrụ mba nke mba m maka valvụ rọba, a na-emepụta ụkpụrụ ngwaahịa ha na ụkpụrụ usoro dịka ụkpụrụ mba ụwa si dị.
Mba ụwa, ụdị valvụ rọba na-agụnyekarị MF BALL valvụ, valvụ urukurubụba, valvụ nlele, valvụ diaphragm, valvụ ọnụ ụzọ ámá na valvụ gbanyụọ. Ụdị ihe nhazi bụ isi bụ ụzọ abụọ, ụzọ atọ na ọtụtụ ụzọ valves. The akụrụngwa bụ tumadi ABS, PVC-U, PVC-C, PB, PE, PP na PVDF wdg
Na ụkpụrụ mba ụwa maka ngwaahịa valve plastik, nke mbụ bụ ịchọ ihe ndị a na-eji eme ihe na-emepụta valves. Onye na-emepụta akụrụngwa ga-enwerịrị usoro ọdịda na-akpụ akpụ nke dabara ụkpụrụ nke ngwaahịa ọkpọkọ rọba ; n'otu oge ahụ, a na-achọ nyocha mkpuchi na valvụ nke valves plastik. Nnwale ahụ, ule arụmọrụ ogologo oge nke valvụ integral, ule ike ike ọgwụgwụ na ike na-arụ ọrụ bụ ihe niile akọwapụtara, na ndụ ọrụ imewe nke valvụ rọba ejiri maka ụgbọ njem mmepụta ihe bụ afọ 25.
Oge nzipu: Sep-22-2021